Ogaden News Agency (ONA) – Ilaahay ma fiirinayo muuqaaladiina
Ilaahay ma fiirinayo muuqaaladiina
Posted by ONA Admin	/ June 11, 2011
Waxaad moodaa hadda inay Itobiya aad xoogga u saartay arimaha dacaayadda waliba nooca loo yaqaano –Black Propaganda- oo ah dacaayada aan jirin ee lagula dagaalamo cadawga. Waxaase aad nasiib darro u ah dadka u jilaya ey adeegsanayso inay yihiin culumadii Soomaliyeed qaar ka mid ah oy ugu talagashay quruxdooda iyo haybadooda diiniga ah inay caalamka u soo bandhigto si loo yidhaahdo waa xukuumad qunyar socod ah oon cadaadis ku haynin dadka laga tira badan yahay (sida ay jecel yihiin kooxda Ibraahim dheere in loogu fityoodo).
Culumada meesha socota qurux badanaa oo gadh waaweynaa. Bashaashnimada ka muuqata iyo marxabaynta iyo soo dhaweynta waxaad moodaa inay tageen dal Somaliyeed oo xor ah. Waana arinta ay Itobiya doonayso inay ka iibiso caalamka oo Ibraahim dheere iyo gacan yarayaashiisa ay waligoodba (hadda umbay banaanka soo dhigeene) ku dhex jireen. Waa hubaal inay Itobiya ku farxayso culumada meesha socota, lagana yaabo inuu gacan-ku-dhiigle Cabdi ilay ku helo madax salaax, hasa ahaatee Ilaahay miyaa lagu khaldi karaa sawiradaa quruxda badan ee lagu soo bandhigayo shabakadaha gumaysiga u adeegaya? Rasuulka CS waxaa ka sugnaaday inuu yidhi;
)إن الله لا ينظر إلى أجسادكم , ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم ( رواه مسلم .
Waa hubaal taasi. Waxaa kaloo ka sugnaaday Rasuulka CS inuu yidhi kuwa aakhiro loogu horcadaabi waxaa ka mid ah nin caalim ah oo markuu sheegtay wanaagii uu dunida ku soo sameeyay uu Ilaahay ku odhanayo been ayaad sheegtaye dantaada waxay ahayd mid aduunyo waanad soo heshay ee Cadaabka gal.
Bal hadda aynu eegno ujeedada ay sheeganayaan kooxdan culumada ah inay u socdaan. Waxaa ka mid ah inay leeyihiin dacwadii Salafiga ee Suufiyada ay ka dulmartay ayaan ka faafinaynaa Ogadenya. Waa hagaag. Ilowse su’asha aadka u fududee qofkasta oo caqli leh uu isweydiin karo waxay tahay, Salafiyada ay Itobiya kala dagaalamayso Somaaliya ee Ogadenya ay u ogolaanayso in lagu fidiyo maxay tahay? Midda kale, waxaa la wada ogsoon yahay in kooxda la magac baxday –AhluSunna Wal-Jamaaca- ay Itobiya soo abaabushay, tababartay, hubaysay say ula dagaalamaan kuwa ay u haystaan inay yihiin cadawgooda koobaad ee ah salafiyiinta.
Maxay tahay marka ujeedada ka dambaysa inay Itobiya ku shiriso culumo sheeganaya inay yihiin salafiyiin magaalada Jigjiga? Dhanka Itobiya waan garan karnaa ujeedada ay ka leedahay iyo waxa ku qasbaya. Umana baahna maskaxda in lagu daaliyo. Itobiya waxay ku shaqaysaa nidaam ah inay madax isu galiso Somalida oo koox aan jirin intay kolba abuurto ay ka horgayso cadawgeeda. Itobiya hadday u nabdoon tahay Ogadenya culumadan iskuma aanay mashquuliseen, aragoodana waxay ka necebtahay shaydaanka waa haday neceb yihiin.
Ilowse arinta u baahan in maskaxda loo yarehe daayo waa kooxdan culumada ah ee waliba sheegan jirtay sanad ka hor inay jihad kula jiraan Itobiya maxaa ku kalifaya inay maanta haybadoodii diineed uga farxiyaan Itobiya oon ogsoonahay dhibka ay u gaysteen dadka Somaliyeed iyo diinta Islaamka? Aniga shaqsiyan igama saarna xuub caaro xataa inaan ogaado ujeedada ay wataan culumadan, gaar ahaan kuwa qaban-qaabinaya shirarka noocan oo kale ah ee horeyna u lahaa waxaan nahay mujaahidiinta Somaligalbeed. Xog badan oo qoraal iyo maqalba ahna waan ka haynaa oo waqtigeeda aan umadda u soo bandhigi doono.
Marka laga yimaado, arimaha maadiga ah ee la taaban karo, nimankan soo abaabulay shirka waxaa haysta cawaaqibta dambiyo qarsoon oy umadda iyo sharcigaba ka galeen. Waxaana la rogmaday oo Ilaahay Casaa Wa-Jalaa uu ku daba gadiyay been badan oy u maleegeen shacabka halgamaya ee gaajada iyo oonka ku dagaalamaya (sida ay afkooda ka qireen).
Waxaa intaa dheer, qofka niyadiisa iyo hawsha uu hayo hadaanay is-waafiqin lagama yaabana inuu Ilaahay guusha siiyo. Nimankan intooda badan waxaan ka haynaa afkooda in aanay waligoodba aaminin inay guul ku gaarayaan jihaadka ay sheeganayeen inay kula jireen gumaysiga Itobiya. Waxaanan ogsoonahay shuruuda 1aad ee guusha inay tahay in uu qofka aamino laba mid un inuu helayo oo aanu waligiiba ku khasaareynin haduu jihaad ku jiro;
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسينيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
Ilaahay niyadooda ayuu ogaa waxay jeclaayeena wuu u fududeeyay oo waa midda ay hadda hayaan ee ah inay isu dhiibeen Itobiya, iyaduna u ogolaato inay isku soo bandhigaan halkaa oo kolba ay shir ku qabsadaan halkaa maadaama ay uga dhamaatay Somaliya.
Waxaa ceeb ugu filan in Jigjiga ay ku soo bandhigaan wajiyadooda iyagoo ku faraxsan oy masaajidda yidhaahdaan muxaadaro ayaan ka jeedinaynaa, meel aan sidaa uga fogayn oo gumaysiga ula baxay Jeel Ogadena lagu ciqaabayo gabdho iyo wiilal aan waxba galabsan oo loo xidh-xidhay waxaa soo agmaray koox ONLF ah oo ma’aanay soo sheegin ama way marti galiyeen? Aaway Islaaminada iyo akhlaaqda islaamka ay ka sheekaynayaan?
Ugu dambayntii, Itobiya inay jabtay waxaa daliil u ah ogolaanshaha ay u ogolaatay kuwan inay halkaa isku soo sawiraan. Kumana imaanin arintaa baryo iyo rabitaanka Meles ee waxay ku timid dhiigga wiilasha iyo gabdhaha naftooda u huray la dagaalnka gumaysiga Itobiya. Waxayna doonayaan sida dixiriga (goroyaan – Hookworm) inay u dhiigmiirtaan shacabkaa halgamaya. Waxayse ogayn inay ula dhimanayaan sida goroyaanka uu ula dhinto qofka markuu dilo haddii ay u suurta gasho Itobiya waxa ay ka damacsan tahay ee ah inay kula dagaalanto muuqaalkooda halganka hubaysan ee ka socda Ogadenya.